Maitiro ekugadzira Nyaya mune yeGoogle Mifananidzo application | IPhone nhau
Musangano wekupedzisira weGoogle wevashanduri watiunzira iyo Photos application, iyo inotibvumidza isu chengetedza mugore mifananidzo yese yatinogadzira kubva kune yedu kifaa nenzira isina muganho chero bedzi vasingapfuure gumi neshanu MPX resolution uye haisi 16k vhidhiyo. Kana iyo kamera yakashandiswa inogadzira yakakwira resolution mifananidzo kana mavhidhiyo uye isu tichida kuichengeta, nzvimbo yekuchengetera ichatorwa kubva pane izvo zvatinazvo muakaundi yedu yeGoogle Drive. Zvikasadaro, Mapikicha anozodzikisira gadziriso kune yakaderera mune ese maviri kesi, kuti tikwanise kuichengeta mugore redu pasina kudzikisa nzvimbo.
Kana iwe uri vashandisi veMapikicha application, sezvo iwo mafoto akaiswa iwe unenge wakazviona izvo iyo application inongotitumira isu zviziviso ichitizivisa nezve mavhidhiyo kana nyaya dzaakagadzira nemapikicha edu otomatiki. Dzimwe nguva zvakanaka uye vanotaridzika zvakanaka, asi kune vamwe, Google inoita nyonganiso uye inosanganisa mafoto asingaite chero pfungwa. Kuti tiite izvi, kana tichida kugadzira zvedu nyaya muActualidad iPad isu tichagadzira dzidziso yekukuratidza maitiro atingaite nenzira yakapusa.
Gadzira Nhau muGoogle Mifananidzo
Pazasi a donhwe-pasi menyu iine zvinotevera sarudzo: Album, Movie, Nhoroondo, Mifananidzo uye Collage. Tinosarudza Nhoroondo.
Iko kunyorera kuchatanga gadzira iyo nyaya nemifananidzo yese yatakasarudza. Kana yangogadzirwa, iyo butiro inozoonekwa patinogona kushandura musoro wenyaya yacho nekudzvanya penzura.
Mukati mezvakaitika, tinogona wedzera zvinyorwa pamamwe mapikicha, kwete ese. Kana isu pakupedzisira tichida kuti zvave sei, tinya paSave muraibhurari uye ndizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira Nyaya muGoogle Mifananidzo app
Iyo App Store neTunes Store vanorega kushanda kuGreece nekuda kwedambudziko rechikwereti